Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo beeniyay in Ruushka uu saameyn ku lahaa doorashadiisa - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldMadaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo beeniyay in Ruushka uu saameyn ku lahaa doorashadiisa
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo beeniyay in Ruushka uu saameyn ku lahaa doorashadiisa
January 11, 2017 Abdirahman Abdullahi Sheikh World 0
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump oo beeniyay in Ruushka uu saameyn ku lahaa doorashadiisa. [Sawirka: Getty Images]
Washington-(Puntland Mirror) Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa si caro leh uga jawaabay eedaha sheegaya in Ruushka uu ku lug lahaa guushiisa, isaga oo sheegay in Moscow aysan marna wax saamayn ah ku yeelan isaga.
Mr Trump ayaa ku cambaareeyay haayadaha sirdoonka Mareykanka sida ay u ogolaadeen wararka beenta ah ee bulshada loo sheegayo, isaga oo is-weydiiyay: “Ma waxaanu ku noolnahay Naasigii Jarmalka?”
Ruushka ayaa sidoo kale si xanaaq leh uga soo horjeestay eedaahaas.
Dmitry Peskov, oo ah afhayeenka Madaxweyne Putin ayaa sheegay in eedahaas ay yihiin wax aan sal iyo raad toona lahayn, kuwaasoo si cad u muujinaya in ay dhibaatayn karaan xiriirka labada dal.
Qoraalo taxane ah ayuu boggiisa Twitter-ka Donald Trump ku sheegay: “Ruushka waligood iskuma ay dayin in ay saameyn ugu yeeshaan. Ana waxba kuma samayn Ruushka. Ma jiraan wax heshiis ah, ma jiraan wax deymo ah, waxna ma jiraan!
“Waxaan si fudud ugu guuleystay doorasho, waxay ahayd dadaal balaaran oo cad, mucaarad qalloocan ayaa isku dayaya in uu warar been ah ku carqaladeeyo guushayada.”
Madaxweynaha la doortay ee Mareykanka Donald Trump ayaa 20-ka bishaan Janaayo si rasmiya u la wareegi doona xafiiska Aqalka Cad.
May 20, 2017 Madaxweynaha Mareykanka oo Sucuudiga ku tagay safarkiisii ugu horeeyay dalka dibadiisa